Apple Watch Griffin WatchStand Accessories | Avy amin'ny mac aho
Ireo kojakoja voalohany amin'ny Apple Watch dia manomboka miroborobo: Griffin WatchStand
Mazava daholo isika fa ny mpanamboatra kojakoja-tànana manosotra tànana rehefa manolotra fitaovana vaovao i Apple, ary tsy mahagaga izany. Ny tsenan'ny kojakoja dia mampihetsika euro an-tapitrisany eran'izao tontolo izao ary isaorana izany Apple dia tsy manana tsipika fampitaovana manokana ho an'ny fitaovany na dia manana tariby aza ianao, dia misy charger mahazatra na toy izany amidy. Rehefa nandeha ny fotoana dia nasehon'izy ireo fa tsy liana amin'ny famoronana ireo kojakoja ireo ihany koa izy ireo satria mahazo vola fanampiny fanampiny avy amin'ireo orinasa antoko fahatelo ireo noho ny fanomezana azy ireo mari-pankasitrahana ilaina hiasa amin'ny fitaovany. Ohatra iray mazava amin'izany ny hafatra lesoka natsipin'ny iPhone rehefa mampifandray tariby misy tselatra izay tsy manana taratasy fanamarinana ofisialy Apple.
Noho ny fanolorana ny Apple Watch vaovao, maro ireo orinasa natokana amin'ny fanamboarana kojakoja izay mikosoka tànana ary manatrika ny fahatongavan'ireo kojakoja maro be ho an'ireo famantaranandron'i Apple vaovao isika. Iray amin'ireo orinasa manana zavatra holazaina amin'ity lafiny ity hatrany i Griffin ary amin'ity indray mitoraka ity dia manolotra ny laharana voalohany izy hampihenana ny famantaranandro vaovao ary hitazona ny iPhone, ny Griffin WatchStand.
Mampiseho amintsika ny kojakoja ilaina amin'ny horonan-tsary fampiroboroboana ny orinasa:
Amin'ity tranga ity tsy manampy ny dock for iPhone saingy azontsika atao ny mamela ny iPhone mifandraika amin'ny alàlan'ny tariby idevice. Ity Griffin WatchStand vaovao ity dia tsy ho vonona hamidy raha tsy amin'ny fahavaratra amin'ity taona ity ary manokatra ny fandrarana ireo karazana kojakoja ho an'ny Apple Watch.
Hanana ny WatchStand an'i Griffin vidiny fanombohana $ 29,99 ary avy amin'ilay toa manirery ho hita amin'ny mainty.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Solosaina Mac » Accessories » Ireo kojakoja voalohany amin'ny Apple Watch dia manomboka miroborobo: Griffin WatchStand
Monowear dia te-hivarotra tarika hoditra sy vy ho an'ny Apple Watch
Ireto misy adaptatera USB-C telo ho an'ny MacBook vaovao